टेलिकम डुबाउने खेलमा सचिव थपलिया, के के छन् कर्तुत ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
टेलिकम डुबाउने खेलमा सचिव थपलिया, के के छन् कर्तुत ?
काठमाडौं , मंसिर १७ – नेपाल टेलिकमलाई पूर्णत धारासायी बनाउने खेलमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया हात धोएर लागिपरेका छन् । टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका थपलिया कम सरकारी कर्मचारी बढी एमालेका कार्यकर्ता हुन् ।
मन्त्रालयमा बसेर एमालेको भन्दा अरुको काम नगर्ने, अन्य पार्टीकालाइ छिर्ने नदिने र दिएपनि काम नगर्ने प्रवृत्तिका प्रमुख रहेको भन्दै मन्त्रालयमा नै उनको आलोचना हुने गरेको छ । अघिल्लो पटक एमालेका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रहेका शेरधन राइलाई समेत काम गर्न नदिएका थपलियाको अराजकताको हल नाघेको भन्दै मन्त्रालय र टेलिकमका कर्मचरीले समेत असन्तुस्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ – शेरधनको समयमा उनकै सचिवालयमा बसेर काम गरेका एक कर्मचारीकाअनुसार मन्त्री चाही दिनेश थपलिया, सचिव चाही शेरधन जस्ता थिए । टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका थपलियाकै कारण टेलिकमको एक हजार २३५ वटा टावर निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र थपलियाका कारण टेलिकम हेटौडा कपडा कारखाना जस्तै हुने भयो भन्ने आम चिन्ता सुरु भएको छ ।
३१५ वटा टावर टेलिकम आफैले बनाउनुपर्ने भएपनि थपलियाकै कारण रोकिएको दुरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणकाअनुसार पटक पटक टावर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिव थपलियालाई आग्रह गरेपनि अहिल्यै यो काम किन गर्ने, विस्तारै गर्दा भइहाल्छ नी भन्दै रोकेर बसेका छन् । ३१५ बाहेक अरु टावर भने चिनियाँ कम्पनी हुवावेले निर्माण गर्नुपर्ने टावर हुन् । सबै सामान आएको छ, तर सचिवज्यू नै टावर निर्माण गर्न दिनहुन्न, यो नै सबैभन्दा गम्भीर विषय बनेको छ, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । टावर सबै बनाएर हाल सञ्चालनमा रहेको थ्री जीलाई नै सबल र सक्षम बनाउनु त कता हो कता उल्टै फोर जी चलाउने नाटक सुरु गरिएको छ ।
टावर निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै मन्त्रालय पुगेका प्राधिकरणका अधिकारी र टेलिकमका इन्जिनियरलाई तपाइहरु किन यति हतार गर्नुहुन्छ, राम कार्कीले मन्त्री पद छाडेपछि मात्रै काम सुरु गर्ने हो भन्दै उल्टै थर्काएर पठाएका थिए, स्रोतले भन्यो । थपलियाले टावर बनाउन नदिए वापत विभिन्न अदृश्य स्रोतबाट समेत रकम उठाउने गरेको बताइन्छ । उनले त्यसका लागि गोविन्दसिंह भण्डारी नामक उपसचिवलाई खटाएका छन् । भण्डारीले त सचिव ज्यूले राम्रो काम गर्नुभएको छ मलाई पनि केही हिस्सा दिनुहुन्छ भन्दै मन्त्रालयको क्यान्टिनमा बसेर गफ चुट्ने गरेको क्यान्टिन सञ्चालक नै बताउँछन् ।
टेलिकमको फोनमा कुरा गर्दा गर्दै काटिने, बोलेको नबुझिने तथा गुणस्तरमा समस्या आएको उनै सचिव भएर आएदेखि हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन, तर सचिव थपलिया मन्त्री असफल बनाउने प्रमुख हतियार नै यही भएको भन्दै काम कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन नदिने पक्षमा रहेका छन् । सरकारको सेवा गर्ने भन्दा पनि खड्ग ओलीको फेर समाउन कुदने थपलिया मन्त्रालयमा एक घण्टा भन्दा बढी समय कहिल्यै नबस्ने उनकै सहयोगीले बताए । सचिवज्यूलाई विदेश भ्रमण, बालकोटको दर्शन नै प्रिय छ भने मन्त्रालय किन बस्नुप¥यो उनका सहयोगीले भने ।
सचिव थपलियाका कारण सरकारी सञ्चार माध्यमहरुमा समेत अराजकता मच्चिएको छ । उनले कुनै पनि निकायमा नयाँ नियुक्ती गर्न दिएका छैनन् । सबै फाइल दराजमा थुनेर हिड्ने र एकाध दिनपछि आफूसँग कुनै फाइल नै नभएको भन्दै सरकारी कागजातको समेत अपलचलन गर्ने गरेका छन् । जहाँ गएपनि कर्मचारी कम नेता बढी जस्तो देखाएर भाषण गर्न तम्सिने थपलियाको कारण आफ्नो साख दिन प्रतिदिन गिर्दै गएको भन्दै सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले आफ्ना निकटस्थहरुसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् । यस्तै गरिरहे सचिव थपलियालाई सरुवा गरेर नयाँ सचिव ल्याउने तयारीमा मन्त्री लागेको बुझिएको छ ।
यस्तै थपलियाले भारतीय कम्पनी यूटिएललाई पुनः चलाउन दिने शर्तमा एमाले नेता रघुविर महासेठबाट दुई करोड बढी लिएको हल्ला समेत सिंहदरबारमा चल्ने गरेको छ । एमाले नेता महासेठ त सचिव थपलियालाई सप्तरीको मह हजुर भन्दै चार किलो मह बोकेर उनकै च्याम्बरमा पुगेका थिए । रघु कमरेड यो राम कार्कीलाई त म तह लगाइ हाल्छु नी लौ तपाईको काम भयो भन्दै थपलियाले दराजबाट चम्चा झिकेर महासेठले लगेको मह चाखेको र आफ्नो च्याम्बरका अधिकृतलाई समेत मह खानुस भनेर दिएका थिए । मह त मिठो रहेछ नी होइन भन्दै उनले महासेठबाट दुई करोड लिएको स्रोतको दावी छ ।
सचिवले पैसा लिएको हुन सक्ने भन्दै गोविन्दसिंह भण्डारीले समेत त्यसको खुलासा गरेका छन् । आफ्नो विरोधी भनेर चिनिएका भरतबहादुर ढुङ्गाना, गौरव गिरि जस्ता काविल उपसचिवलाई करिब करिब जगेडामा राखेका थपलियालाई तत्काल कारवाहीको माग गर्दै मन्त्री कार्कीसँग ज्ञापनपत्र बुझाउन जानेको संख्या बढेपनि हालसम्म कुनै कारवाही हुन सकेको छैन ।
भैसेपाटीमा सञ्चारग्राम बनाउने मन्त्रीको योजना समेत उनैले रोकेर राखेका छन् । कुनै नयाँ प्रस्ताव मन्त्रीले ल्याए सबैभन्दा पहिले एमाले निकटका सञ्चार माध्यमलाई सूचना उपलब्ध गराउने थपलिया टेलिकम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएपनि सेल फोन भने एनसेलकै बढी चलाउने गरेका छन् ।
यस्तै प्रेस काउन्सिल, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रासस,गोरखापत्रलगायतका संस्थाको नियुक्ती पनि उनै थपलियाले रोकेको बताइन्छ । लौन कण हो गुरिल्लाहरुले भ्याउने भएभन्दै उनै थपलियाले एमालेका सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिएर समाचार लेखाउने गरेका छन् । यस बारेमा सचिव थपलियासँग बुझ्न खोज्दा उनी विदेश भएको बुझियो । गोविन्द सिंह भण्डारीले भने आफूलाई कोही कसैले लेखेर केही फरक नपर्ने बताए । उनले एमाले कार्यकर्ता परिचालन गरेर आफू वर्षकै उत्कृष्ठा कर्मचारी भएको स्तुतीगान समेत छाप्न लगाएका छन् ।
त्यसो त भण्डारीले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल जस्ता संस्थाका अधिकारीलाई बोलाएर हरेक शुक्रबार आफूलाई टन्न हुने गरी रक्सी खुवाउनुपर्ने भन्दै दबाव दिने गरेका छन् । रेडियो नेपाल लेखा शाखाका अनुसार भण्डारी सरलाई व्यवस्था गर्न भनेर लगेको पचास हजार रकमको बिल भरपाई हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन ।
अन्यथा कुनै पनि काम नहुने भन्दै धम्की दिएको सचिव थपलिया र उपसचिव भण्डारीका कारण मन्त्रालय इतिहासकै भ्रष्ट भएको भन्दै मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी समक्ष समेत उजुरी परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । विदेशबाट फर्कने वित्तिकै सचिव थपलियालाई स्पष्टीकरण लिने तयारी समेत मुख्य सचिव कार्यालयले गरेको छ ।
सन्दिप योगी, ५ नंबर प्रदेश,बाँके(नेपालगन्ज) । काठमाडौंमा पत्रकारलाई गोली ठोक्छु..
सन्दिप योगी, ५ नंबर प्रदेश,बाँके(नेपालगन्ज) काठमाडौंमा पत्रकारलाई गोली ठोक्छु भन्ने..
महेन्द्र सिंह, ५ नंबर प्रदेश, बाँके(नेपालगन्ज) । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को..
भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताको अपहरण गरेको खुलासा भएको..
सक्षम फाउण्डेशन नेपालले बलात्कार विरुद्ध दबाब -यालीको आयोजना गर्ने भएको..